Frequently asked questions about accessing public services (isiXhosa) | Covid-19 Response
Frequently asked questions about accessing public services (isiXhosa)
Ingaba amaziko ka rhulumente ayakuba evuliwe ngelixesha leAlert level 4?
La maziko nezizakhiwo zikarhulumente zilandelayo zakuba zivaliwe ngexesha le -Alert level 4:
Ezo apho ezenkolo, imicimbi yenkcubeko, ezemidlalo, ezolonwabo, ezokuzonwabisa, imiboniso, amaqumrhu afana nazo apho izinto ezingekho phambili ezingengondoqo zenziwa khona, ziyafumaneka, ziyakhutshwa okanye ziyathengiswa
KwiiPaki zoluntu, amabala ezemidlalo, amalwandle okanye iipuli zokudada
iindawo ezithengisa iimpahla ngamaxabiso aphantsi
Kwii Fêtes nebhazara
EziHotele, kwilodges, kwibed kunye and breakfasts, ‘airbnbs’, amaziko agcina abantu abesekhefini kunye neerizothi zokuzonwabisa kunye ne guest houses, ngaphandle kokuba zisetyenziselwa abakhenkethi bamanaye amazwe abasele benikwe ixeshana kulohotele, kwilodge nakwi guest house
IIndawo zokugcina izilwanyana zikarhulumente nezaBucala ngaphandle kokuba zisetyenziselwa abakhenkethi bamanye amazwe abanikwe ixeshana kwezondawo zezilwanyana
II-Taverns kunye nee-shebeens, okanye iindawo ezifana nezentselo
Ezemiboniso yase Thiyetha nase sinema
Ingaba abafundi abasesichengeni baza kufumana ukutya kwesikolo ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Abantwana abaqhele ukondliwa esikolweni ngexesha lesikolo njengenxalenye yenkqubo yesondlo yesikolo baza kuzifumana izidlo zabo kwiveki eqala ngomhla wesi-6 ukuya kowe-13 kuTshazimpuzi. Izithili zemfundo ziza kusebenzisana nezikolo ezichaphazelekayo ukufumana eyona ndlela ifanelekileyo yokuphumeza esi sicwangciso sokunceda kule nkqubo yokondla abafundi kwizikolo zabo, ngokusekelwe kwiimeko ezizodwa zesikolo nezabafundi baso. Izikolo ziza kusazisa esi sicwangciso kubazali babafundi.
Oku akusayi kwenzeka njengesiqhelo apho aba abantwana batyela khona esikolweni nanjengoko beza kukuthatha ukutya bayokutyela kumakhaya abo, kwaye baza kucelwa abafundi ukuba baze nezitya zabo, kuza kuthathwa amanyathelo okuqinisekiswa ukuba abantu abasondelelani. Kucelwa amaPolisa oMzantsi Afrika ukuba ajikeleza ezikolweni ngala maxesha okuhanjiswa kokutya.
Ingaba iofisi yesebe iAgriculture’s Veterinary Export Certification iya kuvula ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Ngexesha lokumiswa ngxi kwezinto iofisi yeSebe iAgriculture’s Veterinary Export Certification yeNtshona Koloni iya kuhlala ivulile ngexesha lesiqhelo lomsebenzi.
Iingcali ezimbini zevetenari nabahloli abane baya kuba semsebenzini ukuqinisekisa ukuba imithwalo eya kumazwe angaphandle nokukhutshwa kweziqinsekiso zempilo kuyaqhubeka yaye inkonzo yethu yemalike ejongene nokuhanjiswa kwempahla kumazwe angaphandle ayiphazamiseki.
Amagosa akazivumeli iintlanganiso eziza kuhlala kwabantu ndawonye, nangani kunjalo iiklayenti ziyacelwa ukuba zithumele imibuzo ngezinto ezifuna ukuziqonda nge-elektroniki ze izicelo zenziwe zithunyelwe ngeimeyili ku- vetexport@elsenburg.com.
Ngeli xesha imiqathango yococeko imiliselwe kwiofisi yaseMilnerton, ezinye iingcali zevetenari kunye neGosa eliyiNtloko kwiVetenari yoRhulumente/yoLuntu baya kube bengamalalela xa ithe iofisi yaseMilnerton yafuneka ikhwarantinwe kuze kusetyenziswe enye iofisi.
Emva kweyure enye yokuhlolwa nokukhangelwa kwazo nazo naziphi na izinto ezingxamisekileyo eziza kuthunyelwa kumazwe angaphandle kuya kuqhubeka.
Ingaba iHeritage Western Cape iya kuzamkela izicelo?
Iya kuvalwa i-ofisi yeHeritage Western Cape baze abafaki-zicelo bazithumele izicelo nge-imeyili ku- ceo@heritagewesterncape.gov.za
Ndingafikelela njani kwiProvincial Archives njengokuba igumbi lokufundela livaliwe ukuba bangene abantu?
Abasebenzi beProvincial Archives baya kuqhubeka bephendula imibuzo ethunyelwe ngeimeyili ngabaphandi. E-mail: archives@westerncape.gov.za
Ingaba iPosi izakube ivuliwe ngelixesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Iinkonzo zeposi nezokuthuthwa kweposi zakubakho kuphela ekuhambiseni amayeza.
Ingaba ziza kuqhubeka iiNtlanganiso zoNyanga (iAGM) zeForamu yooSolezwe boLuntu (iCPF) ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Azisayi kuqhubeka iiNtlanganiso zoNyaka zoLonyulo lweForamu yooSolwezwe boLuntu gexesha lokumiswa ngxi kwezinto.
INgaba iProjekthi yeNkolo yoKhuseleko loLutsha (iYSRP) iyaqhubeka ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto?
I-YSRP ayisayi kuqhubeka ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto.
Ndingasifaka isicelo selayisensi yotywala ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Akukho tywala obunokuthengiswa ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto kwiindawo zokuselelela okanye ezingezizo ezokuselelela. Ukongeza, iirestyu ziya kuvalwa ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto.
Ukuba ufuna ukunxibelelana noGunyaziwe woTywala weNtshona Koloni, ungatsalela umnxeba kule nombolo: 021 204 9805 (ngeeyure zomsebenzi); uthumele i-imeyili ku- liquor.enquiries@wcla.gov.za okanye uye ku- www.wcla.gov.za
Ingaba liza kuqhubeka icandelo leNkundla eliJongene neeNgxelo ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Eli candelo liqukumbele lonke utyelelo lwalo kwizikhululo zamapolisa nakwiinkundla ngomhla we-18 kweyoKwindla 2020 kwaye liya kuqalis' ukusebenza xa lifumene umyalelo kwiNtloko yeSebe loKhuseleko loLuntu. Oku kwenzelwa ukuphepha ukubeka abasebenzi emngciphekweni kunye nokunciphisa ukudibana nokusondelelana kwabantu.
Ingaba iza kuqhubeka inkqubo yamaGosa eZibonelelo zeZikolo (iSRO) ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Iza kuqhubeka inkqubo yeSRO, nangona kunjalo, isebe liya kunxibelelana neSixeko saseKapa kunye neSebe leMfundo leNtshona Koloni malunga nenkxaso ekubonelelwa ngayo ii-SRO ngokubhekiselele kumanyathelo othintelo.